Isku qorida taleefanka gacanta ee Dubai ee Imaaraadka Carabta
Published by Shirkadda Dubai City at November 16, 2017
Qorista telefoonka gacanta ee Dubai
Telefoonka gacanta Shaqaaleynta Dubai. Sida xaqiiqda ah, Shirkadda Dubai City waxay qaadaysaa talaabo hormar dhanka horumarka ah suuqa shaqaalaysiinta ee Gacanka ee Hindida. Xaqiiq ahaan, shirkadeena waxay sameysay aalado cusub oo shaqaalaysiin ilaa 2009 oo aan maareyno qoritaanka mobilada si isku mid ah. Si kasta, furaha shirkada barwaaqada ayaa si fiican looga yaqaan gudaha UAE suuqa shaqaalaysiinta ee mobilada.
Hadda waxaa ku baxa adeegsiga taleefannada gacanta ee ku yaal Imaaraadka Carabta Emirates. Tusaale ahaan, in kabadan 80% of Hindiya shaqo ka raadinta taleefanka gacanta. Tusaale ahaan, shaqo doonka caalamiga ah ee iyagu maareeya Google waxay ka xisaabaan moobiilka oo keliya. In kasta oo ay tani run noqon karto laakiin qorista telefoonka gacanta isbeddelada. Xaqiiqdii Noqo kuwa aad caan ugu ah ganacsiga qoritaanka inta u dhexeysa 2019 iyo 2020.
Sababtan awgeed, Shirkadda Dubai City waxay sidoo kale hadda u dhaqaaqaysaa howlaheeda cusub ee 'Dubai Guides' oo loogu talagay dadka shaqo doonka ah. Isla mar ahaantaana inta badan xafiisyada xafiisyada ee Marina Road iyo Deira-Dubai. Adeegsiga barnaamijyada taleefanka gacanta sida Gmail si loogu helo CV si toos ah sanduuqa emaylkooda. Shaqaalaysiinta taleefannada gacanta ee magaalada Dubai maalin kasta way sii kordhayaan. Shirkado aad u tiro badan ayaa taleefanno u adeegsanaya shaqaaleysiiye cusub oo ka tirsan magaalada ugu fiican. Akhriso hagidkayaga qoritaanka taleefanka gacanta ee Dubai.
Waa maxay khibrada ugu yar ee looga baahan yahay Dubai?
Guud ahaan shaqaalaynta shirkadda Dubai City. Nasiib darrose adiga ayaa lagu fuliyay hoyga Maareynta Sare. Marka, duruufahaas jira, waxaad u baahan tahay inaad dib u hesho resume aad u fiican iyo shahaadada sare ee boos kasta. Dabcan, waxaad ka heli kartaa shaqada maamulka oo leh khibrad yar. Laakiin dhinaca kale, ma noqon doonto mushahar, waxaad ku riyootaa.
Khibrada ugu yar in lagu shaqaaleeyo UAE waxay ku dhowdahay 2-3 Sanno oo waayo-aragnimo shaqo ah. Dhanka kale hubi waxaa lagugu qori karaa Pakistan si Dubai. Waa in lagu shaqaaleeyaa ururka caalamiga ah oo shaqaaleysiiya Gacanka. Muhiim u ah in la ogaado in hadda shirkadaha caalamiga ah. Isqorista Musharrixiinta Caalamiga ah ee ka socda adduunka. Tusaale kale waa Koonfur Afrika waxay u tartamaysaa shaqaale raadinaya. Xaqiiqdii, ummad kasta waxaa lagu kireysan karaa Emirates. Su’aasha kaliya ayaa ah ma leeyihiin khibrad ku filan dalkooda ?. Aan lahayn khibrad ugu yar, xitaa ma ku riyoon kartid shaqada adduunka.
Dubai City Company Kaalmaynta shaqaaluhu waxay sidoo kale u shaqeeyaan dibadda shaqada. Xaqiiqdi markii la asaasay kooxdeena wareega ayaa musharrixiin badan waxay helayaan waraaqo shaqo. Gaar ahaan shirkadaha shaqaalaysiinta ee maxalliga ah. Wali waad awoodaa Shaqo ka helaan guddiga agaasimayaasha ee Magaalada Dubai. Laakiin taas awgeed, waxaad hubaal u baahan doontaa inaad maareyso shaqadaada codsi heer sare ah.
Shirkadda qorista moobiilka ee UAE
Shirkadeena waa tan koowaad shirkadda suuqa shaqada ee Bariga Dhexe. Iyo sida ugu fiican ee loo isticmaalo taleefannada gacanta oo loogu talagalay ujeedo qorista. Tusaale ahaan, haddii aad jeclaan lahayd inaad ogaato sida shaqo looga heli karo Dubai oo ku saabsan fiiso booqasho gaar ahaan telefoonkaaga gacanta. Kooxdayadu waxay halkan u joogtaa inay kaa caawiso inaad u shaqeyso goob shaqo. Qorista telefoonka ayaa koraya Kaliya maaha Imaaraadka laakiin adduunka oo dhan.
Waxaan kufaraxsanahay marka ugu horeysa ee telefoonka gacanta oo kaliya shirkad qorista ee Emirates. Waxaan gacan ka geysaneynaa sidii loo heli lahaa dhammaan noocyada shaqo raadinta UAE. Gaar ahaan kuwa dhibaataysan si ay u soo jiitaan goobaha shaqada ee caadiga ah iyo hayadaha shaqaalaynta. Kooxdayada Caawinta dadka kale intii karaankeenna ah qaab nololeed wanaagsan oo Dubai ah. Tusaale ahaan, waxaan sameynay wax weyn Kooxda WhatsApp ee Khaliijka iyo UAE. Waxaa jira murashaxiinta cusub ee raadinaya caawinaad shaqo helid.
Waxaan isticmaaleynaa tiknoolajiyad cusub oo cusub Codsiga WhatsApp ee kooxaha tartamaya ee Gacanka. Guul aad u weynna murashaxiinta cusub ayaa shaqo ka helay halkaas. Qorista Taleefoonka gacantu ku yaal Dubai waxay horay usii socotaa 2020.
Taleefanada gacanta ee sameynta hanaanka shaqaaleynta si dhakhso ah
Halkan waa dhowr doodo deg deg ah oo ku saabsan habka shaqaalaysiinta. Sababtaan awgeed ayaa boqolkiiba 70 ah shaqo-dooneyaasha ku sugan UAE. Isticmaalida aaladaha mobilada maalin walba markay ku jiraan shaqo raadinta. Caddaynta ugu qasabka ah ee oranaysa. In kabadan boqolkiiba 81 shaqaalaha waxay u isticmaalaan aaladooda moobaylka shaqadooda. In kabadan boqolkiiba 23 ee howl wadeenada shaqo raadinta ee kujira ereyga “Xirfadda Dubai ee loogu talagalay Hindisaha"Ayaa ka yimid qalabka telefoonka gacanta.
Waayo, qorista Dubai, waxaa jira baaritaanno ka badan inta aad xitaa qiyaasi karto. Tusaale ahaan, dadka raadinaya xarumaha shaqaalaysiinta ee Dubay. Dadka maanta ma haystaan ​​waqti ay ku raadiyaan cilmi baaris sidaas darteed taleefanka ayey u isticmaalayaan. Si kale loogu dhigo, inta badan qurbaha ayaa isku dayaya inay sida ugu dhaqsaha badan u sameeyaan. Inaad aado Google ama Bing iyo inaad garaacdo jumladaha oo aad isku dayeyso inaad hesho jawaabta ugu fiican ee suurta gal ah baadhitaano xirfad shaqo.
Tusaale ahaan, xataa waxay raadinayaan oo shaqaaleysiinaya Bariga Dhexe. Kaliya inaad si degdeg ah u sameyso oo aad u shaqeyso hab fudud oo sahlan. Wax walba oo loogu talagalay dadka maamulaya bartilmaameedka shaqo helista Bariga Dhexe. In ka badan android waa inay ahaato mid dhakhso badan oo lagu shaqaaleeyo UAE. Iyada oo ujeeddadan dadku joojinayaan isticmaalka laptops-ka ayay hadda adeegsanayaan mobilada. Hal shay, bilaabida barnaamijku aad ayey uga dhakhso badan tahay bilowga laptop ama desktop. Qorista Mobiilka ee Dubai waa a mustaqbalka UAE.
Shaqooyinka ku yaal Dubai iyo Abu Dhabi moobaylka
Dadka maxalliga ah ee raadinaya inay xirfad ku yeeshaan United Arab Emirates. Hada waa waddo mashquul ah si aad u raadsato shaqooyinka banaan ee internetka. Inta badan iyaga oo soo dejisanaya barnaamijyada moobiillada ee abuuraya xisaab iyo samaynta digniinta shaqooyinka Dubai iyo Abu Dhabi. Kadib isku day inaad sameysato akoonno bulsho oo wanaagsan, tusaale ahaan, Linkedin ama Bayt. Oo sugitaanka shaqo guurista sanduuqa emailkooda.
Hadda taleefannada mobilada ayaa la isticmaala ugu dhawaan qof kasta oo adduunka ah. In ka badan 95% dadweynaha isticmaala mobilada hawlgallada maalinlaha ah. Marka tan maskaxda lagu hayo, majirto wax naxdin ah oo raadinta cusubi ay soo socoto Shaqooyinka Dubai ee loogu talogalay dadka cusub ee caalamiga ah. Gaar ahaan kuwa qurbaha ka yimid oo khibrad balaaran u leh ganacsi. Waxaad sidoo kale si fudud u raadin kartaa Xirfadaha bangi ee UAE taleefanka gacanta.
Ogaanshaha sida shaqo looga bilaabo UAE. Fure u ah guusha 2018 iyo 2019. Dhinaca wanaagsan, oo leh goobaha shaqo-raadinta ee raadinta. The dadka soo-jiidka ah waxay raadinayaan kooxdayada shaqooyinka. Soo booqdeyaashayada cusubi waxay yaqaanaan sida saxda ah ee ay u gudbin karaan CV-ga. Intaa waxaa dheer, sida diirada loo saaro qoraal kasta oo ka soo baxa WhatsApp Shirkadaha shaqaalaysiinta si ay u helaan shaqooyin banaan oo toos ah oo ay ku dalbadaan. Gaar ahaan kuwa maxalliga ah Shirkadaha shaqaaleynaya on Our kooxaha App noo.
Si kale loogu dhigo, waa inaad bilawdid raadinta barnaamijyada moobiillada sare. Ujeedada laga leeyahay sameynta khibradaada shaqo raadinta mobilku waa ku filan yahay. Aad u baahan tahay inaad foji meelahaas marka hore. Tusaale ahaan, waxaa jira dhowr barnaamijyada mobile-ka ee xirfadaha. Xaqiiqdii, taasi waxay kaa caawineysaa inaad shaqo hesho si dhakhso ah.
Shaqaalaynta WhatsApp ee Magaalada Dubai 2019
Ujeeddadan Imaaraadka Imaaraadka Carabta shaqaaleynta suuqa shaqo qorista iyo shaqo doonka ayaa u baahan istaraatijiyado cusub sida Whatsapp qorista qalab mobile loogu talagalay Gulf Wadamada. Isla mar ahaantaana haddii aad kuusoo bandhigid bulsheed wanaagsan. Waxaad u kordhineysaa xiisaha loo-shaqeeyayaasha mustaqbalka ee UAE. Dhinaca kale, Shirkadda Magaalada Dubai ayaa hadda leh qorshe ay ugu guureyso keliya shaqaalaysiinta taleefannada gacanta ee magaalada Dubai. Maxaa yeelay sida aan ku aragno gudaha Google wuxuu ka sareeyaa 75% xirfadlayaal xirfadlayaal ah oo isticmaalaya taleefan si aad u soo dirto codsiyada.
Xaaladdan, shirkadaha cusub ee shaqaalaynta ayaa ka soo horjeeda tartanka. Kaliya talo iyo iyaga caawinta macaamiisha cusub ee moobiillada macaamiisha iyo shaqo doonka si ay shaqo uga helaan Dubai. Waa muhiim in la garto in tan iyo 2015 markii WhatsApp ay kortay in ka badan dadka isticmaala 1Bilion. Illaa iyo waqtiga xaadirka ah, mid kasta oo ka mid ah shaqaalaha wuxuu raadiyaa fursad shaqo cusub oo telifoonkiisa ah gudaha Hindiya iyo Imaaraadka Carabta.
Shirkadda Dubai City tan iyo markii ay bilaabeen howsha WhatsApp Groups cusub. Maaree hawlgallada caadiga ah, laakiin waxaan u dhaqaaqnay isticmaaleyaasha taleefanka. Waana taas iyada oo aan la daahin caawinta dadka shaqo doonka ah in la shaqaaleeyo. Xawaare aad uga dhakhso badan taleefanka gacanka ee Abu Dhabi iyo Dubai. Dabcan, weli waxaa jira dariiqooyin badan oo horay loogu socdo oo keliya a Shaqaaleynta WhatsApp. Waxaan kuu balan qaadaynaa in kooxdeenu ay si dhab ah u shaqeyn doonaan maalin iyo habeenba si aad u hesho shaqo.
Imaatinka shaqada ee Imaaraadka
Caddeynta ugu badan ee ku cad shaqaale cusub oo cusub ee Dubai jecel jecel our mobile. Ma waxay tahay in dhammaantood ay kor u kaceen waa kanaalada warbaahinnada bulsheed oo keliya si aan u qorno taleefan. Tusaale ahaan Facebook iyo Linkedin sidoo kale shaqada ugu weyn ee Bayt waxay shaqaaleysiisaa shaqaalaysiinta Airway. Hubso inaad booqan doonto dhammaan goobaha shaqada ee loogu talagalay Shaqooyinka beeraha. Shaqooyinka bannaan ee shaqooyinka banaan sababtoo ah waa ka badbaado weyn Dubai. Dabcan, Xirfada dhaqanka Imaatka Imaatka Imaaraadka ayaa isbeddelaya. Gaar ahaan marka xitaa shirkadaha waaweyn ku dhufo suuqa.
Haddaad hadda tahay u diristaada CV-ka ee shaqooyinka MBA Qalabkaaga mobilada. Had iyo jeer hubso in lagu sameeyo habka ugu xirfadeed. Waa maxay waayo-aragnimada adiga oo kale ah oo ka timid waddankaaga ?. Si dhakhso ah ma u heli kartaa waxaad u baahan tahay?. Ma waxaad moodaa inaad khibrad kugu filan leedahay bartilmaameedka suuqa shaqada iyo nooca shaqaalaha aad kufilan tahay inaad u qalanto jaangooyooyin cusub? Hadday jawaabtu Haa tahay, akhriska sii wad waxa aan kuu qaban karno.
Firfircoonkayaga marka loo eego kuwa kale shirkadaha shaqaalaynta ee caawiya dadka shaqo doonka ah. Waxay filan karaan oo ay kala soo xidhiidhi karaan kooxda WhatsApp ee Dubai. Sababtoo ah Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino waxay shaqaalaysiiyaan xubnaha cusub ee shaqaalaha. Dhinaca wanaagsan, shirkadeena ayaa sidoo kale kordheysa tiro yar oo khadadka taleefanka gacmeed ee kale oo ku yaal Emirates. Tan iyo 2016 Shirkadda Magaalada Dubai waligeed kama baxeyso fursadaha shaqaalaysiinta ee fursad u leh qurbaha. Oo hadda shaqaaleysiinta xataa Philipino oo doonaya xirfadlayaal ku sugan Dubai. Gaar ahaan ka caawinta musharixiinta cusub sidii ay u gaari lahaayeen maareeyayaasha shaqaalaysiinta taleefanka moobaylka Gacanka.
Muxuu shirkadeenu sameynayaa si uu kuu caawiyo inaad kiraysato?
Isticmaal qorista telefoonka gacanta ee Dubai
Shirkadeena ayaa caawimeysa shaqo doonayaasha adduunka oo dhan oo ku wacyi galiya sida ay hada u adeegsadaan barnaamijka ugu caansan, WhatsApp si ay shaqo u helaan. Guud ahaan ka hadalka Khibradaheena shakhsi ahaaneed ee adeegyada shaqo raadinta. Shirkaddeennu waxay sameysay dariiqyo warbaahinno bulsho ah. Ujeedada laga leeyahay waxbarista shaqo doonka ee UAE. Hadafkayagu waa inaan tusno ikhtiyaarrada shaqaalaysiinta ee shaqo walba oo shaqo doon ah oo ku sugan Dubai.
Si aan u dhigno qaab kale, waxaynu baraynaa sidoo kale musharrixiinta cusub ee dumarka ka badan suuqa caalamka. Sida loo helo loo shaqeeyaha Dubai si fudud adoo adeegsanaya kooxaha WhatsApp ee Gacanka. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad booqatay websaydhkeena. Waad kula xidhiidhi kartaa wakiilada shaqaaleynta ku xiran Linkedin.
Shirkadeena, waxaad ka heli kartaa macluumaad badan oo ku saabsan shaqaaleynta iyo socodka wareysiga shaqooyinka UAE. Sidaa daraadeed, in aan si kale u dhigno, waxaan mar walba isku daynaa inaanu daboolno hab kasta oo suurtagal ah oo kaa caawin kara inaad maareyso wadada maareynta xirfadaha ee Emirates.
Ama xitaa soo ogow sida loo helo shaqo ee hoteelka oo ah shaqaale caalami ah. Ma jiraan wax luntay intaad daalacaneyso bogga shirkadeena. Waxa kaliya ee aad runtii ka heli karto waa kaalmo toos ah oo qiimo kuu leh adiga. Iyo super siyaabo caqli gal ah sida kooxaha shaqo ee Dubai iyo Anu Dhabi. Loogu talagalay dadka shaqo raadinta cusub adduunka oo dhan. Gaar ahaan loogu talagalay Baakistaan shaqo doonka, iyo sidoo kale Indian iyo Koonfur Afrika kuwaas oo doonaya inay shaqo ku helaan UAE.
Shirkadda Dubai City oo beddelaysa shaqaalaynta suuq ku yaal Imaaraadka Carabta. Nidaamka shaqo qorista guurguura ee isbeddelaya dhammaan suuqa shaqaalaysiinta Bariga Dhexe. Taasi sidoo kale waxaa ka mid ah Shirkadaha Saudi Arabia ee shaqada. Iyo xitaa shirkadaha Qatar ee maaliyadeed oo ka mid ah habka loo horumariyo suuqa ganacsiga moobiilka.
Sidoo kale waxaan nahay oo ah goobta shaqada loogu talagalay xirfadaha bangiga ee Dubai. Waxaan halkaan u joognaa inaan ka caawino qorista kuwa 'raadinta hibooyinka' ka dhigaya mid qiimo badan. Marka la eego qodobbadaas, Shirkadda Magaalada Dubai waxay u dhaqaaqday suuqa taleefanka gacanta iyo illaa iyo inta aan ognahay in loo shaqeeyeyaasha Dubai aan ku soo bandhigin shaqooyinka si sax ah loo soo bandhigo.
Maalmahan waa la dhaafay si aad u hesho shaqo badan oo lacag leh dhawr maalmood. Waxaa intaa dheer, wax badan ma suurtoobi karto in laga helo shaqo fiican oo laga helo dalka Imaaraadka sannadkan 1. Waxaad ku samayn kartaa taxadar aad uga shaqeyn karto arjiga shaqo kasta. Tusaale ahaan, kiiskan, raadinta boosaska banaan ee goobaha shaqada iyo goobaha shaqada iyada oo ka badan 50k xitaa qaadan kartaa dhowr sano.
Isbeddellada shaqaalaysiinta taleefannada casriga ee UAE
Sida aynu hubinta suuqa shaqaaleynta ee Dubai ilaa 2009. Xaqiiqdi waanu raadineynaa isbedelka cusub ee kireysiga Bariga Dhexe. Iyo gunaanadkii ugu dambeeyay shaqaale aqoon u leh Bariga Dhexe iyo Aasiya. Dhab ahaantii, kharashyada cusub ee adduunka oo dhan. Waxay mudan yihiin in laga shaqaaleeyo waax kasta oo ka tirsan United Atab Emirates.
Shirkadeena Dubai waxay isku dayeysaa inay ka falceliso oo meele badan oo shaqo doon ah ka dhigto Imaaraadka Carabta. Waa in la xusuustaa in isbeddelka ugu weyn ee UAE ee mobile waa WhatsApp. Dabcan, waxaan u isticmaaleynaa si aan u helno caalami cusub Musharixiinta ka shaqeeya UAE ee 2018. Sanadaha cusub ee soosocda ayaa soo buuxsamay oo xaqiiqdii, waxay keeni doonaan baahiyo shaqaaleyn cusub. Sannado kale 2019 iyo 2020 horay u socdaan. Iyo cusub Shirkadaha waxay keeni doonaan isbeddello badan xagga qorista ee Dubai.
Hantidhawrku wuxuu si tartiib ah u noqonayaa qalab qorista si aad u rajeyneyso inaad ku biiri doonto WhatsApp Kooxaha Dubai. Dhab ahaan, uma baahnid si uu u noqdo qof deggan Dubai oo uu shaqo helo. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad leedahay caawinta markaad raadineyso. Ujeedada looga leeyahay shaqo raadinta macluumaadka gudaha Dubai. Kusoo gal WhatsApp WhatsApp-ka Dubai ama booqo Dubai blog dhajin. Waxaad ka heli kartaa macluumaad intaa ka badan xitaa Shaqooyinka macalimiinta ee Dubai intaas oo dhanna waa lacag la’aan. Qorista Mobiilka Dubai dhexdeeda isticmaal oo shaqo ka hel Imaaraadka.
Nooca boosaska banaan ee aad ka heli karto
Mid ka mid ah shaqooyinka banaan ee cusub Dadka booqanaya Emirate waxay raadinayaan shaqooyinka Automotive ee Dubai. Waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah xirfadaha caanka ah ee Gacanka. Tusaale ahaan, ka shaqeynta Dubai Porsche oo baabuurkan wata. Riyo ku noqo booqdayaasha, mid ka mid ah shirkadahan ugu fiican ayaa hadda shaqaaleysiinaya. Si fudud ayaad u bilaabi kartaa a lataliyaha iibka, xiriiriyaha taleefanka ama xitaa sida soo dhoweynta ama fulinta suuqgeynta ee shirkadan.
Dhamaadka maqaalkeenna, waxaan u baahannahay in aan xuso kuwa ugu caansan deynta bangiyada ee loogu talogalay. Sidan, waxaad ka bilaabi kartaa shaqo abuur Imaaraad. Waxaan si xoogan u aaminsanahay inuu yahay kan ugu horumarsan shaqo dheer oo aad waligaa ka heli karto UAE. Marka, aakhirka, waxaan kuu rajeyneynaa nasiib wacan baaritaankaaga shaqooyinka banaan. Waxaan rajeyneynaa inaan ka wada hadalnay waxa aan ka ognahay oo dhan howlaha Emirates. Dhanka kale, waa inaad sidoo kale fiirisaa waxa shirkadayadu kugula talineyso loogu talagalay. Mid ka mid ah ugu fiican waa Shirkad shaqo raadin oo ah Careerjet ee Dubai iyo Wanaag ku filan boggaga Monster Gulf. Shirkadahaasi waxay xaqiiqsadeen inay bilaabaan inay wada shaqeeyaan oo ay codsadaan CV-gaaga.
Shirkadda Dubai City hadda oo la siinayo hagisyo wanaagsan qurbaha iyo shaqo doonka caalamiga ah ee ku sugan Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Sidaa daraadeed, arrintaan maskaxda ku haysa, waxaad hadda heli kartaa hage, talooyin iyo shaqo ku qoran Imaaraadka Imaaraadka Carabta adoo luuqaddaada ku hadlaya.